Maxaa loo ga hadle shirka golaha wazeeridda Soomali ee Khamiislaha – idalenews.com
Maxaa loo ga hadle shirka golaha wazeeridda Soomali ee Khamiislaha
Muqdisho, 20 July 2017 – Golaha Wasiirada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa oo uu shir-guddoominayey Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre, Arrimaha kulanka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa Amniga, hindise sharciyeedyada, waxqabadka wasaaradda Gargaarka iyo arrimo kale.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa Wasiirada Amniga, Difaaca iyo Taliyeyaasha Booliiska iyo Nabad-Sugida ka codsaday inay warbixin ka siiyaan golaha xaalada amniga.
“ Howlgallada xasilinta amniga iyo howlgalka militariga ayaa si wanaagsan u socda dalka,Deegaanka Kuunyo-Barrow ee Jubbaland ayaa12kii ilaa iyo 15kii July lagu dilay ilaa 90 maleeshiyaadka argagaxisda ah” waxaa sidaasi golaha uag warbixyay madaxda hey’adaha amniga dalka.
Warbixino faahfaahsan ka dib Golaha Wasiiradu waxey u mahadceliyeen hay’adaha amniga kuna dhiirigeliyeen inay sii laba-laabaan horumarka ballaaran ee xasilinta amniga, waxeyna si gaar ah ugu mahadceliyeen shacabka Soomaaliyeed doorkooda xasilinta dalka oo muhiim u ahaa horumarka ballaaran ee laga sameeyey dhanka amniga.
Gaari qarax Kabuuxo oo lagu qabtay duledka magaalada Muqdisho.
Maxamed Cabdullahi Farmaajo oo ku baaqay in la joojiyo dagaalka ka socda Xeraale.